Ungayisebenzisa njani imowudi emnyama kuWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani imowudi emnyama kwi-WhatsApp?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 363
Uninzi lwe ii -apps zemiyalezo ekhawulezileyo yeselfowuni Kuza ujongano olunjengokuba ukukhanya kuninzi. Oko kukuthi, izingxoxo kunye nolunye ujongano luza mhlophe ngombala omncinci ohluka ngokuxhomekeka kwisicelo. Kule meko, iya kuba mhlophe ngohlaza.
Inyani yile yokuba lo mbala ekuhambeni kwexesha uyacaphukisa, ngakumbi xa silele ebusuku kwaye nokuba sikwehlisa kangakanani ukukhanya, iyaqhubeka nokukhathaza. Kungenxa yesi sizathu ukuba baninzi iiapps ezinje ngeFacebook, I-Instagram, iTelegram kunye neWhatsApp zinendlela emnyama onokuyenza kwaye ukhubaze nanini na ufuna.
Kwimeko apho ungazi ukuba ungayenza njani, qhubeka ufunda eli nqaku lifutshane ukuze ufunde indlela yokuyisebenzisa.
Amanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza imowudi emnyama kwi-WhatsApp
Ukwenza le ndlela isebenze ngokulula kakhulu. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo siza kuthi siwanike iinkcukacha ngezantsi:
Qala ngokuvula usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android okanye ye-IOS
Emva koko jonga "Olunye ukhetho" kwaye apho ukhethe useto lokugqibela ukhetho.
Kwiphaneli entsha eya kuboniswa kuwe, kuya kufuneka khetha ukhetho lokuxoxa, kulandele uTema.
Apha uya kuboniswa iindlela ezintathu ezahlukeneyo, kufuneka ukhethe eyona uyithandayo.
Kananjalo, unokukhetha phakathi kwendlela emnyama apho tshintsha umbala omhlophe oqhelekileyo, kwithoni emnyama emnyama, kunye nepaneli ephezulu apho kuvela khona i-WhatsApp. Ngendlela efanayo, ikunika ukhetho lokukhetha imowudi yokukhanya kwimeko apho imowudi emnyama ingasabonakali isebenza.
Kwelinye icala, unethuba lokukhetha ukhetho olungagqibekanga. Ngale ndlela, useto lwesicelo luya kuhlengahlengiswa kuseto lwenkqubo. Oko kukuthi, ukuba utshintsha indlela emnyama yenkqubo yakho yeselfowuni, kuya kuba njalo nakwindlela yokujongana noWhatsApp.
Kutheni ukhetha imowudi emnyama endaweni yokushiya imeko emiselweyo okanye emhlophe?
Kwinqanaba lenkqubo, amaphephadonga kunye nokukhanya okuphezulu kakhulu, kuthetha ukusetyenziswa okukhulu kwebhetri. Lo mgaqo ubangelwa kukuba ngelixa ipikseli ikhanya ngamandla amakhulu, ngakumbi amandla aya kuwasebenzisa.
Ke ngoko ukuba inikwe amandla imowudi emhlophe kuWhatsapp, oku kuyakutya amandla amancinci kwiselfowuni. Kodwa ke, esi ayisosizathu sodwa sokuba abasebenzisi bacetyiswe ukuba basebenzise le ndlela.
Esinye isizathu esinokukunika sona malunga nokusetyenziswa kwendlela emnyama kukuba le ndlela ivumela umsebenzisi ukuba afumane ukukhanya okuncinci ebusuku. Ke ukulala kwakho akuyi kuchaphazeleka njengokusebenzisa indlela emhlophe. Ngendlela efanayo, sicebisa ukuba usebenzise imowudi emnyama kunye nokusebenza kwimo yobusuku kwiselfowuni yakho ukuze ulale Sukuchaphazeleka ngelixa usebenzisa iselfowuni ebusuku.
1 Amanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza imowudi emnyama kwi-WhatsApp
2 Kutheni ukhetha imowudi emnyama endaweni yokushiya imeko emiselweyo okanye emhlophe?
Uyivula njani i-whatsapp?
Uhlaziya njani iTikTok?